Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha weelka ururinta dhiigga ee Shiinaha ee la tuuri karo. Zhancheng
Tuubada tijaabada waxay ka samaysan tahay wax PE/PP/PS ka sarreeya, waxay leedahay iswaafajin kiimiko oo wanaagsan.waxaa la isku dayay in lagu kaydiyo inta badan dareeraha dabiiciga ah ee polar, acid daciif ah, saldhig daciif ah.
- Tuubada tijaabada PS/PP waxaa lagu farsameeyay farsamo aad u fiican, Alaabooyinka qaarkood waxay istaagi karaan xawaaraha centrifuge ilaa 4500 rpm iyadoon dillaacin ama dillaacin.
- Cabbirro iyo noocyo badan ayaa buuxin kara shuruudaha imtixaanka ee kala duwan.
- Calaamadaha waa la beddeli karaa si loo daboolo baahida imtixaanka gaarka ah.
Waxaa loo habeeyey ururinta iyo kala-goynta hargabka, ifilada shimbiraha, cagaha gacanta iyo afka, jadeeco iwm. Waxa kale oo loo habeeyey ururinta iyo u-gudbinta muunadaha Chlamydia, Mycoplasma iyo Ureaplasma. dabada iwm.
1. Tubbo ururinta muunad:
Jidhka iyo daboolka tuubooyinka waxaa sameeyay Polypropylene, Ma jiro wax isbadal ah kadib HTHP (121 Celsius, 15min), ma laha wax ka hooseeya heerkul hoose (-196 Celsius). waxay u adkaysan kartaa fidinta maatiga ah iyo saamaynta firfircoon. Naqshadaynta hoose ee dhajiska ayaa ka dhigaysa mid leh centrifugation iyo gariir. Caddaynta baxsiga.
2. Dheecaan kaydinta muunad ah:
Marka loo eego tijaabada baaxadda leh ee saamaynta ku leh dareeraha Aasaasiga ah, nidaamka keydinta, dejiyeyaasha borotiinka, wakiilka difaaca qabowga, amino acid, iwm.
3. Dhuuqo dabacsan:
Tiknoolajiyadda naylon ee diyaarka ah ee cusub ayaa hagaajin karta hufnaanta ururinta muunadda ee bukaanka heerka ugu sarreeya Nylon ayaa si toos ah oo isku mid ah loogu dhejiyaa dusha caaradda suufka, taas oo
wanaajiyo hufnaanta ururinta iyo sii deynta unugyada iyo muunadaha dareeraha ah.
Hagaajinta xasaasiyadda gorfaynta, Ma jiro haraaga muunad waxayna dardar gelin kartaa daaweynta muunadda. Calaamadda PS way fududahay in la kala gooyo. Waxaa loo habeeyay afka ilmagaleenka, nasopharynx, godka afka, Nidaamka Qaadashada Dembi baarista iyo ururinta DNA iwm.
4. Halabuurka alaabta:
1) La tuuro suufka naylon oo daadsan ama suufka polyester -ka, hal xabbo.
2) 1-6m dareere (Heerka sare ee togan ee baaritaanka PCR), Laba kuul galaas.
3) Boorsada biosafety, hal gabal.
4) Tuubada suufka iyo ururinta waxaa lagu buuxiyay bac-caag ah ama bac caag ah, oo lagu shubaa shucaaca Gamma.
5) 2 sano ayaa ku dhaca heerkulka caadiga ah.
Tuubada dhiigga EDTA-K2/K3
12 × 75mm/12 × 100mm
Caafimaad ahaan waxaa loo isticmaalaa baaritaannada dhiigga ee caadiga ah sida unugyada dhiigga cas, unugyada dhiigga cad, platelets -ka iyo falanqaynta unugyada kala duwan
Dhiigga u ururi miisaanka sumadda ee tuubada jirka sida loo baahdo. Ururinta dhiigga ka dib, si tartiib ah u rog rogga tuubada dhiigga 5-6 jeer si aad si buuxda isugu qasto waxyaabaha lagu daro iyo saamiga dhiigga.
Tuubbada coagulant gel ee soocidda
Caafimaad ahaan waxaa loo adeegsaday biochemical, immun, serum iyo baaritaanno caafimaad oo kale si loo helo shaybaarrada serum oo tayo sare leh
Dhiigga u ururi miisaanka sumadda ee tuubada jirka sida loo baahdo. Ka-qaadista dhiigga ka dib, si tartiib ah u rogo tuubada dhiigga ururisa 5-6 jeer si aad si fiican isugu qasto coagulant iyo muunadda dhiigga, oo u isticmaal ka dib marka dhiiggu si buuxda u milmo.
Ma jiro tuubo lagu daro
Caafimaad ahaan waxaa loo adeegsaday tijaabooyinka biochemical serum, shaqada beerka, shaqada kelyaha, sonkorta dhiigga, lipids -ka dhiigga, borotiinka serum -ka iyo go'aaminta enzyme kala duwan
U soo ururi dhiig sida loogu baahan yahay miisaanka sumadda ee tuubada jirka, oo isticmaal ka dib marka dhiiggu si buuxda u milmo
Heparin Sodium/Tube Lithium
Caafimaad ahaan waxaa loo adeegsaday tijaabooyinka bayoolaji ee degdegga ah, glycosylated haemoglobin iyo baaritaanka dhiigga
Sodium citrate 9: 1
Caafimaad ahaan waxaa loo adeegsaday in lagu tijaabiyo farsamaynta xinjirowga dhiigga (PT, APTT, factor coagulation)
Sodium citrate 4: 1
12 × 75mm/8 × 120mm
Caafimaad ahaan waxaa loo isticmaalay go'aaminta heerka miyir -qabka unugyada dhiigga
Hore: Koob muunad caag ah oo la tuuro
Xiga: Tuubada sampling fayraska la tuuro
Koobkii Muunadda Shaybaarka
Koobab Muunad Yar